Krim CBD tsara indrindra ho an'ny 2021 | TryTranquil.net
$0.00 ny hovidiana
Voahangy vita amin'ny vovo-dronono CBD, vovoka Voahangy
Home / menaka / Voahangy vita amin'ny vovo-tsolika CBD w / Vovoka Voahangy
Size Fidio ny safidy1 OZ / 700 MG
hanitra Fidio ny safidyNaturalVanilla Clear
Voahangy vita amin'ny vovo-dronono CBD w / Voan'ny vovo-dronono
SKU loha-Pearl-fanosotra SOKAJY menaka Tags CBD fanosotra, CBD lohahevitra
CBD Cream Nosoratan'i TryTranquil.Net
Misy fomba maro isan-karazany amin'ny fampiasana cannabidiol (CBD), na izany aza, raha mitady fanamaivanana ny fanaintainana na hozatra ianao na manampy amin'ny toe-pahasalamana, dia mety ho ny crème topical CBD no safidy tsara indrindra.
Ny crème CBD dia misy masirasira, menaka fanosotra na loha-hevitra ampidirina amin'ny CBD ary azo zahana mivantana amin'ny hoditra.
Na dia mbola eo am-pototry ny zaza aza ny fikarohana momba ny CBD dia mampanantena izay fantatsika momba ny CBD Cream.
A 2016 fianarana Loharanom-pitokisana Vita tamin'ny totozy, hitany fa ny fampiharana CBD Cream an'ny CBD dia afaka manampy amin'ny fitantanana fanaintainana mafy sy fivontosana izay mety ateraky ny aretin-tratra.
Ankoatra izany, ny American Academy of Dermatology Nanambara izy fa ny fampiasana ny lohahevitra One CBD vokatra ho toy ny sampana fanampiny ho an'ny psoriasis, mony ary eczema, amin'ny fivoriana fanao isan-taona amin'ny taona 2018.
Ny fahombiazan'ny CBD dia mety miankina amin'ny ireto manaraka ireto koa
Kalitaon'ny CBD Cream
Fatran'ny CBD Cream
Ireo akora amin'ny CBD Cream
Ny olombelona dia manana rafitra fanaovana sonia sela izay antsoina hoe endocannabinoid rafitra (ECS).
Ny mpahay siansa sasany dia nanatsoaka hevitra fa ny CBD dia mifandray amin'ny singa lehibe ao amin'ny ECS - ny receptor endocannabinoid izay mitoetra ao amin'ny hery fiarovanao sy ny atidohanao.
Ny mpandray dia proteinina kely izay mifatotra amin'ny sela. Ireo sela ireo dia mahazo famantarana, izay simika indrindra, ary mizara azy ireo amin'ny vatanao manontolo.
Ireo valiny ireo dia miteraka fanamaivanana ny fanaintainana sy fanoherana ny inflammatoire vokatra izay manampy amin'ny rafitra fitantanana fanaintainan'ny vatanao. Midika izany fa ny loha-hevitra CBD sy ny vokatra hafa dia mety hahasoa ny olona manaintaina mafy toy ny mitaiza marary lamosina.
1 2018 famerenana nampiseho ny fomba fiasan'ny CBD miaraka amin'ny fanaintainana mitaiza amin'ny vatana. Ny fandinihana dia nijery ireo fanandramana natao teo anelanelan'ny 1975 sy Martsa 2018. Ireo fikarohana ireo dia nandinika karazana fanaintainana marobe, anisan'izany:
CBD Krim ho an'ny fanaintainana fanaintainana
A Natoky ny fianarana 2016 Source nijery ny CBD ampiasaina amin'ny totozy misy aretin-tratra.
Ny mpahay siansa dia nametraka crème CBD tamin'ny biby mpikiky mandritra ny 4 andro. Ny rodents dia nahazo 3.1, 0.6, 6.2, na 62.3 milligrams (mg) isan'andro. Ny mpahay siansa dia nandrakitra ny fihenan'ny fivontosana sy ny fanaintainana ankapobeny amin'ny tonon-taolana voan'ny biby mpikiky. Ny fitsapana dia tsy nisy vokany teo noho eo
Ireo biby mpikiky izay nahazo fatra ambany tamin'ny 3.1 na0.6 mg tsy naneho firy fanatsarana ny isa azon'izy ireo. Na izany aza; hitan'ny siantifika fa ny 6.2 mg / isan'andro dia fatra matanjaka ampy hampihena ny fivontosana sy ny fanaintainana.
Ankoatr'izay, ny biby mpikiky izay nahazo 62.3 mg / isan'andro dia nisy valiny nitovy tamin'ireo biby mpikiky nahazo 6.2 mg / andro. Amin'ny fahazoana fatra mavesatra kokoa dia tsy nahatonga azy ireo hampiseho ny tokonan'ny fanaintainana ambany kokoa.
Ny voka-dratsin'ny krema CBD manala fanaintainana sy manohitra ny fanaintainana dia mety hanampy ny olona voan'ny aretin-tratra. Na izany aza, mila fikarohana bebe kokoa ny olombelona.
(35) Inona no tokony ho fantatrao alohan'ny hampiasanao ny vokatra CBD tsy misy preseta ho an'ny fanamaivanana ny fanaintainana l GMA - YouTube
1 OZ / 700 MG